Shiraz - Amagilebhisi - Iningizimu Afrika
IShiraz yi-cultivar iwayini elibomvu elinambitheka elimnyama elimnyama. Kwaqala ukuwela phakathi kwezinhlobo eziseduze, i-Dureza ne-Mondeuse blanche.
Kwakucatshangwa ngaphambili ukuthi iShiraz ivela edolobheni lakudala lasePheresiya laseShiraz e-Iran yanamuhla. Ukuhlolwa kwe-DNA ngasekupheleni kwe-1990 kodwa kwaqinisekisa iFrance ukuthi yizwe langempela elivela kulo, ngoba izinhlobo zomzali ezivela eShiraz, zivela eningizimu empumalanga yeFrance.
Izinhlobonhlobo sezikhulile esigodini saseRhone iminyaka embalwa edlule. Ukuthandwa kwaso kwavela kusukela ekupheleni kweminyaka yama-1960, njengenhlanganisela neGrenache noir noCarignan.
Ezingxenyeni zezwe lonke, ezihlukahlukene zibizwa ngokuthi yiSyrah. Abakhiqizi bezwe abasha, njengeNingizimu Afrika ne-Australia, bavele baqala ukusebenzisa le migomo ukukhombisa isitayela sewayini.
I-Syrah igcinwe amawayini amaningi wesitayela seRhone ne-flavored fruit fruit, kuyilapho iShiraz isetshenziselwa amawayini amaningi anamuhla ama-berries atholakala esiteji esiphezulu futhi anamazinga aphuza okwedlulele kanye nama-flavour ngaphezulu.
Akuqinisekisiwe lapho uShiraz efika eNingizimu Afrika. Ngokomqondo owodwa, uMbusi uSimon van der Stel waletha eNingizimu Afrika ngasekupheleni kwe-1600s. Omunye uthi uJames Busby, uVicch viticulturist owaqala ukukhiqizwa kweShiraz e-Australia, washiya izihlahla eKapa endleleni eya eYurophu ngawo-1840.
Izivini zokuqala zatshalwe eGroot Constantia ngasekupheleni kweminyaka eyi-1890, kodwa ukuthandwa kwabahlukahlukene kwakunciphise ngenxa yokukhiqizwa okuphansi kanye nabakhiqizi abazange bavuzwe ngekhwalithi. Iningi lezinto ezitshaliwe zinegciwane ngaleso sikhathi.
UBernard Podlashuk, obizwa ngokuthi "uYise waseShiraz eNingizimu Afrika", wayengowokuqala wokubhodlela iShiraz njengewayini elilodwa le-varietal ngo-1957. Phakathi kuka-1992 no-2016, indawo engaphansi kokukhiqizwa yanda kusuka ku-900 ha kuya ku-10 000 ha, okwenze ukuthi iShiraz ibe yindawo yesibili ebomvu enkulu ebomvu kuleli zwe.
Izinhlobonhlobo zenza kahle enhlabathini ephakathi futhi elula, futhi iyavumelana nezimo ezihlukahlukene zezulu. Izivini zitholakala kuzo zonke izifunda zokukhiqiza zaseNingizimu Afrika, nePaarl enendawo enkulu ngaphansi kokukhiqizwa, ilandelwa eduze yiStellenbosch naseSwartland. Yenza amaphesenti amakhulu ezinhlobonhlobo ezikhiqizwa eKapa South Coast.
Imivini inomkhuba wokukhuphuka, wokunyuka kwezinwabuzane onamandla amakhulu. Ukukhiqiza kulinganisela phezulu, ukulinganiselwa cishe ku-10 t / ha no-15 t / ha.
Izithelo zomvini zivuthiwe phakathi nonyaka, kusukela ekupheleni kukaFebruwari kuze kube sekupheleni kukaMashi.
Amajikijolo asemnyama aphakathi, omnyama nesibhakabhaka embala. Isikhumba sinomzimba kodwa sinzima futhi inyama iyamanzi kakhulu. Amajikijolo athatha ukubonakala okonakalayo lapho eshiye emvinini isikhathi eside.
Amaqabunga ahlaza okwesibhakabhaka, amancane, ama-longitudinal nezinhlanu.
Izinhlobonhlobo ziphikisana nezifo, kodwa isifo seShiraz neShiraz ukwehla kungase kube inkinga ngama-clones athile. Izinhlobonhlobo zizwela umonakalo womoya.
Isetshenziselwa ukukhiqizwa kwewayini elilodwa le-varietal kanye nenani elikhulu lezinhlanganisela, ezifana ne-Cape blend, okumele iqukathe okungenani ama-30% futhi ayikho ngaphezulu kwe-70% Pinotage, noma i-Rhone classical. Ibuye isetshenziselwe ukwenza iwayini elibomvu elikhanyayo.
Iphrofayela ye-Shiraz yokunambitheka incike ezintweni ezihlukahlukene, kufaka phakathi izimo zezulu, indawo yokukhiqiza, indlela izivini eziphethwe ngayo nendlela iwayini elikhulile ngayo. Amavini ngokuvamile anezinambuzane ezibhemayo, izinhlanzi, izinambuzane nezivunguvungu, nezindawo ezifudumele ezikhiqiza ama-flavour ahlukene kakhulu.
Izivini ezinezivalo ezivulekile, isivuno esiphakathi kanye namagilebhisi ashiywe ukuvuthwa ngokugcwele zihlotshaniswa nama-flavour ovuthiwe namabhisi, kanti lezo ezitholakala ezivini ezivuthiwe ezincane zikhiqiza iphunga elimnandi kakhulu.
Ukusetshenziswa kwe-oki nakho kunomthelela obala emiphumeleni yewayini, kuye ngokuthi indlela kanye nohlobo lwe-oki olusetshenzisiwe.